apple beta software program nhengo dzinogona ikozvino kuisa ios 10.3.2 beta 2 pane yavo iphone kana ipad
Kuru Nhau & Ongororo Apple Beta Software Chirongwa nhengo dzinogona ikozvino kuisa iOS 10.3.2 Beta 2 pane yavo iPhone kana iPad
Nhengo dzeApple Beta Software Chirongwa dzave kubvumidzwa kurodha pasi nekuisa iOS 10.3.2 Beta 2, rimwe zuva mushure mekunge Apple yaburitsa kunze kuvandudziro kune vanogadzira iOS. Iyo yekuvandudza, iyo inorema mukati pa129MB, inosanganisira kugadzirisa kubvumira wechitatu bato rakazvimirira network (VPN) maapplication kushanda pasina chinorova. Uye zvakare, iyo nyowani SiriKit mota mirairo ikozvino iri kushanda, uye mamwe mabhugi akatsakatiswa.
Kana iwe uri nhengo yeBeta Software Chirongwa, ramba uchifunga kuti nekukanganisa, Apple ichave ichiunganidza data rekuongorora uye rekushandisa kubva kunhengo. Izvo zvakati, iwe unogona nyore kusarudza kubuda nekuenda kuZvirongwa>Kuvanzika>Kuongorora uye Kushandisa>Usatume.
Dzimwe nyaya dzinozivikanwa neBeta kuvaka dzinosanganisira imwe ine Siri; mubatsiri chaiye anogona kusatumira zvinyorwa zvine mameseji akazara. Iwo maNotes akaisirwa pamwe neshanduko inoratidza kuti vagadziri vewebhu vanogona ikozvino kupa imwe peji peji kune avo vanoziva kune 'nzvimbo huru dzekufamba.' Kuderedzwa kunofambiswa kunogona kugoneswa pane yako iOS kifaa nekuenda kune Yekugoneka chikamu cheSystem Preferences.
Imwe katsamba inonongedza kuti kufona kwechimbichimbi SOS iri kushanda muIndia chete. NeSOS, kudzvanya bhatani remagetsi kashanu nekukurumidza kuchazongoerekana kwadaidza mabasa ekukurumidzira munyika. Uye zvakare, vanokurumidza kusangana vaunosarudza vanogashira email meseji inotaura kuti unoda rubatsiro, pamwe nemepu inoratidza nzvimbo yako.
Nhengo dzeBeta Software Chirongwa dzinogona kuisa iOS 10.3.2 Beta 2 kuburikidza neye OTA yekuvandudza, kana kubva kune Yekuvandudza portal. Kuti ubatanidze Beta Software Chirongwa, tinya pane izvi batanidzo .
Apple & apos; s iOS 10.3.2 Beta 2 yave kuwanikwa kunhengo dzeBeta Software Chirongwa
mabviro: VentureBeat kuburikidza RedmondPie
Yakanakisa bhajeti 5G mafoni muna 2021
Android 5.0 inoita kuti ubvise uye ubvise tochi yako, Wi-Fi neBluetooth kuburikidza nemirairo yeGoogle Zvino
AT & T inogadziridza yeGPS S7, S7 Edge, Cherekedza 4 uye Cherechedzo Edge inounza yazvino Android chengetedzo chigamba
Samsung uye LG zvakare zvinosimbisa kuti havanonokere mafoni nemabhatiri ekare
Samsung Gear S2 smartwatch runyerekupe kusanganisira nano SIM kadhi
Deal: Google Pixel XL 128 GB inorova mutengo wakaderera zvakadaro (US warandi inosanganisirwa)
Selenium - Maitiro Ekudzoreredza maKuki muNew Browser Window